Ofkpụrụ FMBR Technology - JDL Global Environmental Protection, Inc.
FMBR bụ ndebiri nke ihe eji arụ ọrụ ahụ. FMBR na-eji microorganism e ji mara mara mma mepụta gburugburu gburugburu ma mepụta agbụ nri, na-eme ihe iji mepụta nsị sludge dị ala na mbibi nke mmetọ. N'ihi na nkewa nkewa nke ọma nke akpụkpọ ahụ, nkewa mmetụta dị nnọọ mma karịa nke ọdịnala sedimentation tank, ọgwụgwọ a na-emeso dị nnọọ oke, na kwụsịtụrụ okwu na turbidity dị nnọọ ala.
Nnukwu iku ume ume nke sel bụ sistemụ sludge mbelata. N'ihi nnukwu mmiri ozuzo, ogologo SRT na ọnọdụ DO dị ala, ihe dị iche iche nitrifiers, ammonia oxidized organism (gụnyere AOA, Anammox), na denitrifies nwere ike ibikọ ọnụ n'otu ụdị mmekọrịta ahụ, na microbes n'ime sistemu ahụ zuru oke na ibe ha iji mepụta a microbial nri web na wepu C, N na P n'out oge.
Njirimara Of FMBR
Removal Iwepụ carbon carbon, nitrogen na phosphorus n'otu oge
● Obere ihe fọdụrụ nke sludge na-ewepụsị
Ezigbo nhapu mma
● kacha nta chemical mgbakwunye maka N & P mwepụ
Construction Obere oge iwu ihe
Obere akara aka
Cost Oriri efu / oriri ike
Belata anwuru ndị anwụrụ
● Na-akpaghị aka ma na-elezi anya
Bdị Mwube FMBR WWTP
Ngwugwu FMBR Equipment WWTP
Akụrụngwa ahụ ejikọtara ọnụ, yana ọrụ obodo ga-ewulite mmepe, ntọala akụrụngwa yana tankị na-enweghị isi. Kwụ nzọ ụkwụ dị obere ma oge iwu ya dị mkpụmkpụ. Okwesiri maka ebe mara mma, ụlọ akwụkwọ, mpaghara azụmahịa, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, okporo ụzọ, okporo ụzọ, nchedo mmetọ mmiri, ọgwụgwọ ezighi ezi, na ụlọ ọgwụ na ebe obibi, ọrụ mberede, nkwalite WWTP.
Ihe FMBR WWTP
Ọdịdị nke osisi ahụ bụ ihe ịchọ mma na obere akara, enwere ike wulite ya na WWTP gburugburu ebe obibi, nke na-agaghị emetụta ọdịdị obodo ahụ. Kinddị FMBR WWTP a dabara adaba maka nnukwu ọrụ ọchịchị WWTP.
Treatmentkpụrụ Ọgwụ FMBR
Teknụzụ ọgwụgwọ mmiri na-ekpochapụ mmiri nwere ọtụtụ usoro ọgwụgwọ, yabụ na ọ chọrọ ọtụtụ tankị maka WWTP, nke na-eme ka WWTP bụrụ usoro mgbagwoju anya na akara ukwu. Ọbụna maka obere WWTP, ọ chọkwara ọtụtụ tankị, nke ga-eduga na ikwu ụgwọ ụlọ dị elu. Nke a bụ ihe akpọrọ "Scale Effect". N'otu oge ahụ, usoro ọgwụgwọ mmiri mmiri nke ọdịnala ga-ewepụ ọtụtụ sludge, na ísì dị arọ, nke pụtara na WWTP nwere ike wuru n'akụkụ ebe obibi. Nke a bụ nsogbu akpọrọ "Ọ bụghị n'azụ ụlọ m". Na nsogbu abụọ a, WWTP ndị ọdịnala na-abụkarị nnukwu buru ibu ma dị anya site na ebe obibi, yabụ achọrọ nnukwu swa sistemu nwere nnukwu ego. A ga - enwekwa ọtụtụ ntinye na ntinye n'ime usoro nsị, ọ ga - emebi naanị mmiri dị n'okpuru ala, kamakwa ọ ga - ebelata usoro ọgwụgwọ nke WWTP. Dabere na ụfọdụ ọmụmụ, nsị nsị ga-ewe ihe dị ka 80% nke mkpokọta ọgwụgwọ mkpofu mkpocha.
Ọgwụgwọ adịghị mma
Teknụzụ FMBR, nke JDL mepụtara, nwere ike belata ọtụtụ njikọta ọgwụgwọ nke teknụzụ ọdịnala na otu njikọ FMRB, na sistemụ ahụ agbakọtara ọnụ ma bụrụ akụrụngwa tozuru etozu, yabụ akara ukwu ga-adị obere ma ọrụ nrụpụta dị mfe. N'otu oge, enwere sludge ole na ole na-enweghị isi, n'ihi ya enwere ike wuru ya n'akụkụ ebe obibi. Na mmechi, FMBR teknụzụ dabara adaba maka usoro ọgwụgwọ na-ezighi ezi, ma mata "Nchịkọta Na-anakọta, Na-emeso na Ntugharị", nke ga-ebelata itinye ego na sistemu mmiri mmiri.
Omenala WWTPs na-agbasokarị tankị ihe owuwu. Kinddị WWTP a na - ewere nnukwu akara ukwu nwere ihe ọkụkụ dị mgbagwoju anya na isi na - esi isi, ọdịdị ahụ enweghị atụ. Otú ọ dị, site na iji teknụzụ FMBR nwere atụmatụ dịka usoro dị mfe, enweghị isi na obere sludge organic fọdụrụ, JDL nwere ike wulite osisi ahụ n'ime "usoro ọgwụgwọ n'okpuru ala ma na-adọba mbara ala" WWTP na gburugburu ebe obibi na mmiri mkpofu na ịghaghachi, nke na - enweghị ike ịchekwa akara ụkwụ, ma nyekwa ebe obibi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke obibi maka gburugburu ebe obibi. Ebumnuche nke WBTP nke obibi FMBR na-enye azịza na echiche ọhụrụ maka ịzọpụta nchekwa na imegharị, yana WWTP enyi na gburugburu ebe obibi.